စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးပါတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့
Home Health & Beauty စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးပါတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့….
စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးပါတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့….
စိတ်ချမ်းသာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ ယခင်ကနဲ့ မတူပဲ ကိုယ်အလေးချိန်က ပိုပြီး တက်လာလေ့ရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရသိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝ တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အကြံပေးချက်လေးတွေ မျှဝေပေးပါရစေ။
၁။ ကျန်းမာရေးကို မမေ့လျော့ပါနဲ့။
အိမ်ထောင်သည်တွေ ဝလာတာ စိတ်ချမ်းသာလို့ ဝတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကနေ ဆိုးကျိုးတွေဘက်ကို ကူပြောင်းမသွားအောင် ကျန်းမာရေး ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာတဲ့အခါ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့ အဆစ်အမြစ်၊ ဆီးချိုးစတဲ့ ရောဂါတွေအပြင် အခြားရောဂါများစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိမ်ထောင်းရေးမှာ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိစေရင် ကျန်းမာရေးဘက်ကိုလည်း မမေ့လျော့ဖို့ သတိရှိသင့်ပါတယ်။
အပြန်အလှန်စိန်ခေါ်မှုဆိုတာ ကျန်းမာရေးအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြုလုပ်တာက သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ထိရောက်မှုရှိသလို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာလည်း မပျင်းတော့ပါဘူး။ အားကစားရုံမသွားဖြစ်ရင်တောင်မှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လမ်းပြိုင်လျှောက်တာမျိုး စတဲ့ မခံချင်စိတ်လေးတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို သူနဲ့ကိုယ် အပြိုင်လုပ်လိုက်ပါ။ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သင့်အတွက် သင့်တော်မှုရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ရွေးချယ်ပြုလုပ်တာက ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
၃။ အစားအသာက်တွေ ပြောင်းလဲပစ်ပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ အစားအသောက်မျိုးကို တစ်ပတ်စာ plan ချပြီး ချက်ပြုစားသောက်ဖို့ပြုလုပ်ပါ။ ဒါ့မှမဟုတ် ဈေးကို မသွားခင် ဒီနေ့ချက်မဲ့ ဟင်းလျာကို ကြိုတင်ပြီး စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ သင့်အတွက် ဈေးဝယ်တဲ့အခါတွေ့ကရာ အစားအသောက်မျိုးကို ဝယ်မိတာထက် ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်မဲ့ အစားအသောက်မျိုးကို ရွေးဝယ်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကနေ ကျန်းမာရေးကြောင့် စိတ်သောကတွေ မရောက်စေဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူ တွေ အစားအသောက်တွေအားလုံး ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးသက်တမ်း နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကလည်း တစ်ဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲလာပြီးဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အစားအသောက်ကို ပြောင်းလဲဖို့မမေ့လျော့ပါနဲ့။
ဆံကေသာကို ပိုးသားလိုချောမွတ်စေဖို့ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ?
စိတျခမျြးသာမှုရှိတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတှကေ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးပါတယျတဲ့ ဒါပမေဲ့….
စိတျခမျြးသာတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူတှဟော ယခငျကနဲ့ မတူပဲ ကိုယျအလေးခြိနျက ပိုပွီး တကျလာလရှေိ့တယျလို့ လလေ့ာမှုတှအေရသိရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဝ တယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျဆိုးကြိုးတှဖွေဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးသိမျးဖို့အတှကျ အကွံပေးခကျြလေးတှေ မြှဝပေေးပါရစေ။
၁။ ကနျြးမာရေးကို မမလြေ့ော့ပါနဲ့။
အိမျထောငျသညျတှေ ဝလာတာ စိတျခမျြးသာလို့ ဝတယျလို့ ဆိုပမေဲ့ ပြျောရှငျမှုကနေ ဆိုးကြိုးတှဘေကျကို ကူပွောငျးမသှားအောငျ ကနျြးမာရေး ထိနျးသိမျးမှုတှေ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးလာတဲ့အခါ နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာရောဂါတှနေဲ့ အဆဈအမွဈ၊ ဆီးခြိုးစတဲ့ ရောဂါတှအေပွငျ အခွားရောဂါမြားစှာဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အိမျထောငျးရေးမှာ စိတျခမျြးသာမှုတှရေရှိစရေငျ ကနျြးမာရေးဘကျကိုလညျး မမလြေ့ော့ဖို့ သတိရှိသငျ့ပါတယျ။
အပွနျအလှနျစိနျချေါမှုဆိုတာ ကနျြးမာရေးအရ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျတဲ့အခါ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စိနျချေါမှုတှနေဲ့ ပွုလုပျတာက သငျတို့နှဈဦးစလုံးအတှကျ ထိရောကျမှုရှိသလို လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရမှာလညျး မပငျြးတော့ပါဘူး။ အားကစားရုံမသှားဖွဈရငျတောငျမှ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ လမျးပွိုငျလြှောကျတာမြိုး စတဲ့ မခံခငျြစိတျလေးတှနေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးကို သူနဲ့ကိုယျ အပွိုငျလုပျလိုကျပါ။ အပွငျးအထနျလကေ့ငျြ့တာမြိုးမဟုတျဘဲ သငျ့အတှကျ သငျ့တျောမှုရှိတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးကို ရှေးခယျြပွုလုပျတာက ပိုပွီး ထိရောကျမှုရှိပါတယျ။
၃။ အစားအသာကျတှေ ပွောငျးလဲပဈပါ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ ကိုကျညီမှုရှိတဲ့ အစားအသောကျမြိုးကို တဈပတျစာ plan ခပြွီး ခကျြပွုစားသောကျဖို့ပွုလုပျပါ။ ဒါ့မှမဟုတျ စြေးကို မသှားခငျ ဒီနခေ့ကျြမဲ့ ဟငျးလြာကို ကွိုတငျပွီး စဉျးစားထားဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒီလိုမှ သငျ့အတှကျ စြေးဝယျတဲ့အခါတှကေ့ရာ အစားအသောကျမြိုးကို ဝယျမိတာထကျ ကနျြးမာရေးနဲ့ သငျ့တျောမဲ့ အစားအသောကျမြိုးကို ရှေးဝယျမိမှာ ဖွဈပါတယျ။
သာယာခမျြးမွတေဲ့ အိမျထောငျရေးကနေ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ စိတျသောကတှေ မရောကျစဖေို့အတှကျ မိမိတို့ရဲ့ အနအေထိုငျ၊ အပွုအမူ တှေ အစားအသောကျတှအေားလုံး ပွောငျးလဲဖို့လိုအပျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးသကျတမျး နညျးနညျးကွာလာတာနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကလညျး တဈဖွေးဖွေး ပွောငျးလဲလာပွီးဆိုရငျ လကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ အစားအသောကျကို ပွောငျးလဲဖို့မမလြေ့ော့ပါနဲ့။
Previous articleဆံကေသာကို ပိုးသားလိုချောမွတ်စေဖို့ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ?
Next articleပျိုမေတို့အတွက် လက်ပွေ့အိတ် ဝတ်စုံဖက်ရှင် အကြံပြုချက်များ